सेलेब्रेटीहरूको २०७५ सालका योजना- करिश्मालाई एसइईको पिर, भर्जिन किताब लेख्ने सरस्वतीको तयारी
नयाँ वर्ष हरेकका लागि ठूलो उत्सव हो । नयाँ खुसी, उमंगका साथ नयाँ वर्ष आउने गर्छ । हामी अनेक वाचाहरू गर्छौं, अनेक सपना सजाउँछौँ । बितेको वर्षमा भएका गल्तीहरू नदोहो-याउने प्रण गर्छौ। विभिन्न योजनाहरू बन्छन्, बनाइन्छन् ।
यस्तै, पुरानो वर्ष कसरी बित्यो र नयाँ वर्ष कसरी अर्थपूर्ण बनाइँदै छ त ? लेखक/सेलेब्रेटीहरूको ०७४ कस्तो रह्यो र नयाँ वर्ष २०७५ का योजना के छन् ? नयाँ पत्रिकाका लागि शिवराज योगी र नवीन प्यासीले गरेको कुराकानी :
० अन्तर्रााष्ट्रिय मूर्तिकला प्रदर्शनी : धनु याखा/नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान,मूर्तिकला विभाग प्रमुख
० नयाँ कथा‘पाइ’आउँछ : राजव/साहित्यकार